Battle of Warships: Naval Blitz 1.68.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.68.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Battle of Warships: Naval Blitz
Battle of Warships: Naval Blitz ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Battle of Warships is one of the legendary ship simulator mobile game about battle 1942 and naval warfare, sea battles online and offline. Navigate your unique ships that used in the WW1 and WW2. Improve on your own ship, increase health points, engine speed and turns. Customize navy army with the flag of your country. Get daily rewards, level up your skills and ship's characteristics. Become the God of War and war thunder with warship craft, battle with enemy for war and order. Try to blitz with artillery enemy’s airplane and jet wings.
✫ More than 20 unique battleships including the most legendary ones of the World War 1 and World War 2!
YAMATO, Missouri, Bismarck, South Dakota and even Aircraft carrier (it includes air planes and jet)! Choose your destiny! Be commando of all of them in our ship games!
✫ A unique update system for each ship of yours
Huge numbers of advanced technology different weapons for improving your ship such as torpedoes, interceptors, missiles and so on for your battleship craft!
✫ Latest 3D graphics, corresponding to all the characteristics of the best mobile game!
Super realistic boat gunship battle graphics, exquisitely crafted with attention to the smallest details for wwi and ww2 games genre.
✫ Touch control & several versions, including the gyroscope!
Totally easy and intuitive control, just put weapons on enemy and push SHOT! Art of game that’s all you need to win in WW army games. Victory day not far off!
✫ Weather change system on the game maps! Fight day & night!
Rain, sun, sunset and even snow. What kind of weather do you prefer in military games?
✫ Massive world battlefield area
Mountains and glaciers will be your companions in this navy games fleet!
BoW is war games genre multiplayer games ocean wars simulator. Our war games is totally FREE for download.
စစ်သင်္ဘောများ များ၏ တိုက်ပွဲစစ်တိုက် 1942 နှင့်ရေတပ်စစ်ဆင်ရေးအကြောင်းကိုဒဏ္ဍာရီသင်္ဘော Simulator ကိုမိုဘိုင်းဂိမ်းထဲကတစ်ခု, ပင်လယ်တိုက်ပွဲများအွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ WW1 နှင့် WW2 များတွင်အသုံးပြုကြောင်းကိုသင်၏ထူးခြားတဲ့သင်္ဘောများသွားလာရန်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောပေါ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ကျန်းမာရေးအချက်များ, အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းနှင့်အလှည့တိုးမြှင့်။ သင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏အလံနှင့်အတူရေတပ်ကြည်းတပ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ နေ့စဉ်ဆုလာဘ်ကိုရယူလိုက်ပါ, သင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သင်္ဘောရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတက်ညီ။ , စစ်သင်္ဘောယာဉ်နှင့်အတူစစ်ပွဲနှင့်အမိန့်အဘို့ရန်သူနှင့်အတူစစ်တိုက်စစ်ပွဲ၏ဘုရားသခင်နှင့်စစ်မိုဃ်းချုန်းဖြစ်လာသည်။ အမြောက်တပ်ရန်သူရဲ့လေယာဉ်ပျံများနှင့်ဂျက်အတောင်ပံနှင့်အတူ blitz ဖို့ကြိုးစားပါ။
ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲ 1 နှင့်ကမ္ဘာစစ်2အရှိဆုံးဒဏ္ဍာရီသူတွေကိုအပါအဝင်✫ ကျော် 20 ထူးခြားတဲ့တိုက်!
Yamato, မစ်ဆူရီ, Bismarck, တောင်ဒါကိုတာနှင့်ပင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော (ကလေကြောင်းလေယာဉ်နှင့်ဂျက်တို့ပါဝင်သည်)! သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို Choose! ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောဂိမ်းမှာသူတို့ကိုအားလုံး၏ကွန်မန်ဒို Be!
✫ဥစ္စာ၏အသီးအသီးသင်္ဘောများအတွက် တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့ update ကိုစနစ်က
ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့တိုက်ယာဉ်အဘို့ဤမျှလောက်ပေါ်တော်ပီဒို, interceptors, ဒုံးကျည်များနှင့်အဖြစ်သင့်ရဲ့သင်္ဘောတိုးတက်အောင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလက်နက်များကြီးမားနံပါတ်များ!
အကောင်းဆုံးကိုမိုဘိုင်းဂိမ်းအပေါငျးတို့သဝိသေသလက္ခဏာများမှသက်ဆိုင်ရာ✫ နောက်ဆုံး 3D ဂရပ်ဖစ် ,!
အကောငျးဆုံးပထမကမ္ဘာစစ်နှင့် ww2 ဂိမ်းအမျိုးအစားများအတွက်အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်ကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူထွင်းထုစူပါလက်တွေ့ကျကျလှေလက်နက်ကိုင်စစ်တိုက်ဂရပ်ဖစ်။
✫ Touch ကိုထိန်းချုပ် & အဆိုပါ gyroscope အပါအဝင်အများအပြားဗားရှင်း ,!
လုံးဝလွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုရုံရန်သူနှင့်တွန်းအားပေး shot အပေါ်လက်နက်တွေထား! သငျသညျ WW စစ်တပ်ဂိမ်းထဲမှာအနိုင်ရလိုအပ်သမျှရဲ့ဂိမ်း၏အနုပညာ။ အောင်ပွဲနေ့ကမနီးမဝေးချွတ်!
✫ မိုးလေဝသပြောင်းလဲမှုစနစ်အား ဂိမ်းမြေပုံပေါ်တွင်! တစ်ရက် & ညဥ့် Fight!
မိုးရွာရွာ, နေရောင်, နေဝင်ချိန်များနှင့်ပင်ဆီးနှင်း။ သငျသညျစစ်ရေးဂိမ်းထဲမှာရာသီဥတုကအဘယျသို့သောပိုနှစ်သက်ပါသလဲ
✫ ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို စစ်မြေပြင်ဧရိယာ
သက်တံ့စစ်ပွဲဂိမ်းအမျိုးအစား multiplayer ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာစစ်ပွဲများ Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဂိမ်းများကို download ပြုလုပ်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
Battle of Warships: Naval Blitz အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Battle of Warships: Naval Blitz အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Battle of Warships: Naval Blitz အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Battle of Warships: Naval Blitz အား အခ်က္ျပပါ
l4d1k0 စတိုး77.82k
Battle of Warships: Naval Blitz ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Battle of Warships: Naval Blitz အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.68.8
ထုတ်လုပ်သူ Cube Software
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cubesoftwaregames.com/privacypolicy/
App Name: Battle of Warships: Naval Blitz
File Size: 238.31MB
Release date: 2019-06-24 21:59:47
လက်မှတ် SHA1: C4:E0:F4:BF:9E:D7:AB:72:9E:73:57:59:A6:15:FA:3D:CD:8F:81:B2
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Dumitru Muset
အဖွဲ့အစည်း (O): CubeSoftware
နယ်မြေ (L): Chisinau
နိုင်ငံ (C): MD
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Moldova
Battle of Warships: Naval Blitz APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ